Puntland oo sheegtay in ay tilaabo ka qaadi doonto Shiikh Rusheeye - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in ay tilaabo ka qaadi doonto Shiikh Rusheeye
April 15, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Shiikh Cabdulxaq. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ay qaadi doonto tilaabo ka dhan ah Shiikh Cabdulxaq oo si weyn loogu yaqaan Shiikh Rusheeye, sida Wasiirka Cadaalada iyo Arrimaha Diinta uu u sheegay taleefishinka dowladda maanta oo Arbaco ah.
“Cabashooyin badan baa ka imaanaya ninkan Rusheeye la leeyahay, waa lagu howlanyahay howshiisa, waxaan rajaynaynaa waxyaabaha uu Puntland ka wado aysan dib dambe u dhici doonin,” ayuu yiri wasiir Cawil Shiikh Xaamud.
Waxa uu intaas ku daray: “dadkan laguma marin habaabin karo lagumana duufsan karo wax shareecada Islaamka ka soo horjeeda.”
Dhawaan waxaa baraha bulshada wareegayay muuqaal uu Shiikh Rusheeye ku sheegayo in uu daaweynayo dadka uu ku dhaco xanuunka coronavirus. Waxaana uu muuqaalka ku sheegay haddii qofka loo keeno uu ka dawoobi waayo xanuunka in isaga madax xabad lagaga dhufto.